संघ – Page 717 – Halkaro
ट्रम्पको ह्वाइट हाउस प्रवेशसँगै टीटीपीबाट बाहिरियो अमेरिका
काठमाडौँ । अमेरिका १२ देश सम्मिलित रहेको व्यापार सम्झौता ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरशीप (टीपीपी) बाट बाहिरिएको छ ।पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा १२ राष्ट्र सहभागी टीपीपी सम्झौता भएको थियो । आफूले निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टीपीपीबाट बाहिरिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा टीपीपीलाई सम्भावित खतरा भन्दै यसले […]
मोर्चालार्इ फकाउन प्रधानमन्त्रीलार्इ हम्मे हम्मे
काठमाडौँ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरी अन्य विधेयकलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न भने हम्मे परेको छ । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने विपक्षीको माग र संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने मधेसी मोर्चाको […]
६ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिबादी पक्राउ
प्रकाशित मिति : २०७३, १० माघ सोमबार
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०७१ साल जेठ ७ गतेको फैसलाले डाँका मुद्दामा ६ बर्ष कैद र रु. दश लाख चौवालिस हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकी फरार एक अभियुक्तलार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको पदमपोखरी गा.बि.स. वडा ७ बस्ने संजय साईला श्याम भन्ने (सन्जय रुम्बा लामा) लाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर तथा ईलाका प्रहरी कार्यालय […]
सुनिता गुरुङ मृत्यु प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
चितवन । गर्भवति महिला सुनिता गुरुङको मृत्युको विषयमा छानविन गर्न गठन भएको समितिलाई पीडित पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण माग गरेका छन् । मृतक गुरुङका श्रीमान सहितको टोलीले सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण बारे जानकारी मागेका हुन् । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्युभएकी गर्भवत्ति महिला सुनिता गुरुङको विषयमा […]
अर्नाको स्वागतमा चितवन
चितवन । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अर्ना ल्याउन चितवनको प्राविधिक टोली कोशी टप्पु पुगेकोे छ । निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा कमल गैरेको नेतृत्वमा अर्का एक डाक्टर र तीनजना वन्यजन्तु प्राविधिकको टोली कोसी टप्पु पुगेको हो । डा गैरेका अनुसार आरक्षभित्र कहाबाट के कस्ता अर्ना लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन थालिनेछ ।आरक्षको […]
हिंशा पीडित महिलाको संरक्षणमा मञ्जुश्री
चितवन । हाम्रो देशमा कानुन निर्माण भएपनि महिला हिंशा नरोकिनु दुःखद पक्ष रहेको छ । अझै पनि हाम्रो देशमा महिलाहरु बिभिन्न यातना तथा उत्पीडनको सिकार बन्न बाध्य भएका छन । के अझै पनि यस्तो हुनु सान्र्दभिक होला त ? चितवन जिल्लामा रहेर असहाय महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बिभिन्न सामाजिक संस्थाले कार्य गरेका छन । तर […]
मजाक होइन यसरी पुग्ने छ नेपालको रेल युरोपसम्म
प्रकाशित मिति : २०७३, १० माघ सोमबार January 25, 2017
काठमाडौँ । १ जनवरीमा चीनको झिजियाङ प्रान्तको यियु सहरबाट छुटेको रेल झन्डै ८ हजार माइल दूरी पार गर्दै बुधबार बेलायतको लन्डन पुग्यो । चीनबाट छुटेको सो रेल काजकिस्तान, रुस, बेलारुस, पोल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मनी र फ्रान्सका विभिन्न भाग छिचोल्दै १८ दिन लामो यात्रा तय गर्दै बुधबार लन्डन पुगेको हो । नेपालमा यतिबेला रेलमार्गको चर्चा चलिरहेको छ […]
जातिय पार्टी बन्दै माअाेवादी केन्द्र
काठमाडौँ । वर्गीय पक्षधरताको वकालत गर्दै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले जातीय शैलीमा ‘संगठनात्मक कार्यविधि’ अघि बढाउने भएको छ । पार्टीलाई जातीयकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचाइसहित तयार पारिएको कार्यविधि केन्द्रले परिपत्रका रूपमा मातहत निकायमा पठाउन थालेको हो । केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा तीव्र विरोध भए पनि वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘संगठनात्मक कार्यविधि’ लागू गर्न […]
मलामी जान पनि हेरिन्छ मृतकको राजनीतिक अास्था
काठमाडौँ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि मौकाको फाइदा उठाउनु नेपाली समाजमा नौलो कुरा होइन । तर, पछिल्लो समयमा मृत शरीरको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने मालामीमा समेत राजनीतिक आस्थाको आधारमा सहभागी हुनेहरुको संख्या बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका पाँचथर जिल्ला सदस्य पूर्णकुमार आङ्देम्बेका भिनाजु तथा चिलिङदिनका नपाली कांग्रेसका नेपाली कांग्रेसका सदस्य राजेन्द्रकुमार चेम्जोङको फिदिमको हावा खोलामा […]